Cajiin:- Daanyeerkii Ugu Horeeyay Ee Moobeel Iskaga Qaaday Sawiro Selfy Ah Iyo Siday Ku Dhacday – Borama News Network
Zackrydz oo 20 sano jir ah ayaa BBC-da u sheegay in abbaare 11-kii subaxnimo ee Sabtida markii uu hurdada ka soo toosay uu ogaaday in taleefankiisa gacanta uu maqan yahay.
Dhowr saacadood kaddib, muuqaal lala wadaagay BBC-da ayaa muujinayay daanyeer isku dayaya in uu cuno taleefanka. Muqaalka ayaa laga dhex arkayay danyeerka oo kaamerada taleefoonka hoos u fiirinaya oo dhabarkiisuna ay ka muuqdaan caleemo iyo shanqarta koox shimbiro ah.
Ardaygan ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo meelaha kale ee adduunka ee daayeertu ay ku nooshahay magaalooyinka gudahooda iyo agagaarkooda, ay dhacdo in daanyeertu ay dadka alaabta ka xaddo, sidaas oo ay tahayna, waxa uu sheegay in hore aysan halkan uga dhicin in daanyeer uu wax ka xado dadka deggan xaafaddooda.
Dhacdooyinkii layaabka lahaa ee sawirrada daanyeerta
Ma ahayn markii ugu horraysay oo sawirro uu daanyeer iska qaaday ay qabsadaan warbaahinta caalamka.
Sanadkii 2017, dacwad u dhaxeysay sawir qaade Ingiriiska u dhashay iyo hay’ad u doodda xaquuqda duurjoogta ayaa la xalliyay kaddib laba sano oo la isku haystay sawirro uu daanyeer qaaday.
Sanadkii 2011, daanyeer lagu magacaabo Naruto oo ku nool hawdka dalka Induniisiya ayaa dafay kaamero uu leeyahay nin lagu magacaabo David Slater kaddibna uu sawiirro dhawr ah iska qaaday.
Slater ayaa ku dooday in isagu uu leeyahay lahaanshaha xuquuqda sawirradaasi oo intarneetka aad loogu baahiyay balse hay’ad u doodda xaquuqda duurjoogta oo lagu magacaabo Peta ayaa sheegtay in ay khasab tahay in daanyeerkii sawiiradani qaaday uu ka faa’iideysto dhaqaalaha Slater uu ka helay sawirradaasi.
Maxkamad ku taal Mareykanka ayaa markii dambe Slater u xukuntay xuquuqda lahaanshaha sawirradaasi sidaasina daaqadda uga tuurtay dacwaddii hay’adda Peta balse Slater ayaa ogolaaday in 25% dakhligii ka soo galay sawirradaasi uu siiyo hay’adda dhaqaaleyso daanyeerkaasi iyo kuwo kale oo ku nool keymaha dalkaasi Induniisiya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan” Kama Yeeli Doono Farmaajo In Uu Hal Maalin Ku Darsado Kursiga
Ciidanka Booliska Galmudug Oo Gacanta Ku Soo Dhigay Khamri Tiro Badan
Maxay Afrika Ku Muteysatay Ammaanta Xakameynta Feyriska Corona?
Bnnstaff Bnnstaff September 24, 2020 September 24, 2020
Gudoomiye Xinif Oo Ka Hadlay Qaban Qaabada Shirka Golaha Dhexe Ee Xisbiga Kulmiye
Bnnstaff Bnnstaff September 23, 2020